BlueConic: Na-anakọta, jikọọ, ma bulie Njem Ndị Ahịa | Martech Zone
Tuzdee, Machị 3, 2015 Tuzdee, Machị 3, 2015 Douglas Karr
Site n'enyemaka nke nnukwu data na teknụzụ gụgharia, enwere ụdị ụdị azụmaahịa azụmaahịa ọhụrụ na-enye ụlọ nkwakọba ihe etiti, n'oge, ebe a na-ejide mmekọrịta onye ọrụ yana na offline ma wee tinye ozi na omume na ha. BlueConic bụ otu ikpo okwu dị otú ahụ. N'ịbụ nke dị na nyiwe gị dị ugbu a, ọ na-anakọta ma jikọta mmekọrịta gị na ndị ahịa wee nyere gị aka ịmepụta ozi ahịa bara uru.
Ikike imeghachi oge ma weghara ọtụtụ ihe data na-enyere ụlọ ọrụ aka iduzi atụmanya ha ma ọ bụ ndị ahịa ha site na njem ndị ahịa na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma. Site na ilekwasị anya na njem ndị ahịa karịa ụlọ ọrụ gị, ị nwere ike imetụta mkpebi ịzụ ahịa karịa, ma, n'ikpeazụ, mee ka ọnụ ahịa ndị ahịa gị dịkwuo ogologo ndụ.
Usoro BlueConic abụọ bụ isi, Ntugharị Na-aga n'ihu na Mkparịta ụka Na-aga n'ihu, na-enyere gị aka ịnyefe nkwukọrịta nkwukọrịta nke na-eburu mkparịta ụka ndị ahịa site na ọwa gaa na channel. Na BlueConic ikpo okwu na-etinye aka na nchịkọta teknụzụ ahịa ọ bụla; na-ewe usoro dị omimi ma na-aga n’ihu maka njikwa data; ma na-arụ ọrụ na ezigbo oge, n'ọtụtụ.
Site na Ngwaahịa Blueconic
Nchịkọta Data Ndị Ọrụ - Na-anakọta ma chekwaa data echekwara echekwa, dịka aha na ụkpụrụ usoro, na data omume ezighi ezi, dị ka clickstreams na ụdị ntinye. Emesiri omume niile a n'otu profaịlụ onye ọrụ ma emelite ya na mmekọrịta ọ bụla.
Association Njirimara - Na-akpakọrịta ọtụtụ profaịlụ ma jikọta ha n'otu. Mkpakọrịta njirimara dabere na omume onye ọrụ na njirimara pụrụ iche, na ọbụlagodi enwere ike kpebisie ike. Ndị ahịa, ndị iwu na-akpakọrịta profaịlụ na-adịghị mma n'otu ntabi anya.
Ihe Nghọta - Ozi na-enye ndị na-ere ahịa aka inyocha mmekọrịta onye ọrụ ma gbanwee nghọta nwere ike ịbanye na ohere ọhụụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọpụta ngalaba ọhụụ ugbu a, lelee mgbanwe n'omume onye ọrụ na oge ma mepụta dashboards na-agbanwe agbanwe iji nyochaa mkparịta ụka obe na oge.
Usoro nkwekọrịta Smart - Enye ohere marketers nke nke iche iche nke onye ọrụ dị ka inbound data weghaara. A na-eme nkewa on-the fly site na iji njirisi dịka oriri ọdịnaya, akara aka oge, ọnụego mgbanwe, oge mmekọrịta, na omume igwe mmadụ ma ọ bụ data mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mgbe niile-na njikarịcha - Nọgidere na-ebuli mmekọrịta gị na ndị mmadụ n'otu n'otu maka mgbanwe, nchọpụta ngwaahịa, na / ma ọ bụ njikọ ka ukwuu. Ihe omuma mmekọrịta zuru oke nke onye ọrụ ọ bụla dị maka njikarịcha ozugbo, na-atụ aro maka ndị ọrụ dị iche iche n'otu mpaghara.
Mgbasa Ozi Mgbanwe - Nọgide na-enwe nkwekọ nke mkpọsa na ozi na njem ndị ahịa. Ọganihu a chọrọ ịmegharị nzaghachi mkpọsa na nyiwe ozi dị iche iche, dịka web, email, ngosi, ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Tags: ihe omumaomumemgbe niile-na njikarịchaacha anụnụ anụnụndozi mkpọsamkpebimkpakọrịta njirimaraprofaịlụsmart nkewanchịkọta data onye ọrụ